Molo, wonke umntu, nantsi iFuzhou Bontai Diamond Tools Co; Ltd e-China, ingcali yezixhobo zedayimani ezinamava angaphezulu kweminyaka engama-30.
Kuhle ukuba uqaphele ukuba siza kuba nomboniso weqonga eAlibaba ngomhla we-9, Matshi (ixesha laseBeijing), lo ngumboniso wokuqala esiwubambayo emva kokuba sibuyele emsebenzini emva kweholide yeNtwasahlobo yalo nyaka.
Ngexesha lomboniso odlalayo, siza kuzisa izixhobo zedayimani ezintsha, Apha ngezantsi kukho imveliso ephambili esiza kuyazisa, ibizwa ngokuba yi "Z" ivili lendebe yedayimane, Ewamkele iwelding yetekhnoloji entsha. Ukusetyenziswa kwale teknoloji kwishishini lethu lezixhobo zedayimani alikho poular ngoku, kuphela ngamaxabiso entengiso amakhulu, umzekelo uHusqvarna sele eyisebenzisile. Le milo yecandelo ikwayimodeli esandula ukuvulwa, yahlukile kwintengiso. Ukuchasana nokuchasana nokuchasana neemfuno ezingqongqo ngakumbi kumgangatho wamacandelo, oku kuqinisekisa umgangatho ophucukileyo. Xa siwelda amacandelo emzimbeni, iyakhazimla phakathi kwawo, ekuhlaleni ivelisa ubushushu, oku akuyi kuphinda kusebenze kwakhona amacandelo kwaye kutshabalalise ubume bawo, ke oko kwenza ukuba ivili lendebe libe nobomi obude obusebenzayo kwaye lube ndlongondlongo kunokuba Iivili zekomityieyenziwe ngeteknoloji ephezulu ye-welding technology. Okwesithathu, inamandla okuwelda angcono, aqinisekisa ukuba amacandelo awasuki ngokulula xa usila. Okokuqala, i-Resistance welding ayiyi kushiya uphawu lwe-welding kwaye imigca ye-welding incinci, ngenxa yoko ijongeka intle ngakumbi kunamavili endebe aqhelekileyo.
Uba, siya kukhetha ezinye iimodeli izixhobo zedayimani ezizodwa ukuba sizithengise ngexesha lomdlalo wethu obukhoma, onokonwabela izaphulelo ezinkulu. Eyokuqala ngu-3 ″ idayimane yokugaya idiski, isetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yomgangatho we-grind we-Chinese, njenge-ASL, XINGYI, RONLON, MERROCK, TUOMEI njl. iipads zokucoca ezomileyo, yomile isetyenziselwa ukukhonkotha ikhonkrithi, umgangatho we-terrazzo, inobomi obukhulu, ubukhali kunye nokukhanya, kunye nokusebenza kweendleko.